ဗြိတိန်မှာတွေ့ရတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်အကြောင်း ဘာတွေသိထားပြီလဲ? | Duwun
ဗြိတိန်မှာတွေ့ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေပြီး မထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တစ်မျိုး တွေ့ရှိရပြီ အလျင်အမြန် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေကြောင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး မတ်ဟန်းကွတ်ခ်က လွှတ်တော်ကို အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက် ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့မှာတော့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်က COVID-19 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုပ်မြင်သံကြားမှတစ်ဆင့် ရှင်းလင်းပြောကြားမှုအတွင်း အစောပိုင်း လေ့လာမှုတွေအရ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ဟာ မူလဗိုင်းရပ်စ်ထက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပိုမိုကူးစက်နိုင်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ် လျင်မြန်စွာ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေပြီး မထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်နေတာကြောင့် ခရစ်စမတ်ကာလအတွင်း လန်ဒန်တစ်မြို့လုံး၊ အင်္ဂလန်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ဝေးလ်တို့မှာ ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေး lockdown စီမံဆောင်ရွက်မှုတွေကို အတင်းကျပ်ဆုံးနဲ့ အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ အဆင့် ၄ (tier four) အဖြစ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (World Health Organization - WHO) ကတော့ ဗြိတိန်မှာတွေ့ရတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာ ထိန်းချုပ်မရတာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်မှ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ဩစတြေးလျ၊ ဒိန်းမတ်၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်နဲ့ ဂျီဘရော်တာတို့မှာလည်း တွေ့ရှိလာရပါတယ်။
COVID-19 ဖြစ်စေတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ် တွေ့ရှိထားတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှ လေကြောင်းခရီးစဥ်တွေကို ဥရောပနိုင်ငံ အများအပြားအပြင် ကနေဒါ၊ အီရန်၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ အိန္ဒိယတို့က ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ ဗြိတိန်မှာ တွေ့ရှိလာရတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်း လက်ရှိအချိန်အထိ သိရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုစည်းဖော်ပြထားပါတယ်။
ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာ ထွက်ပေါ်လာတာလဲ?
မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ် B.1.1.7 ကို အယ်လ်ဖာ (Alpha) လို့ အမည်ပေးထားပြီး ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်း ရက်များအတွင်း တွေ့ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေက Kent ဒေသမှာ ထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့ ကူးစက်မှုနှုန်း လျော့ကျခြင်းမရှိမှုအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ မျိုးဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အင်္ဂလန်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ လန်ဒန်မှ လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ကူးစက်မှုအစုအဝေးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ရဲ့ မျိုးဗီဇတွေကို ပြန်လည်ခြေရာခံ စစ်ဆေးခဲ့ရာ ထိုဗိုင်းရပ်စ်ဟာ စက်တင်ဘာလအတွင်း ပထမဆုံး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ Public Health England (PHE) က ပြောပါတယ်။ ထို့နောက် ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ နိုဝင်ဘာလလယ်ပိုင်းအထိ လူတွေကြားမှာ အလွန်နည်းပါးတဲ့ ပမဏအဖြစ် ပျံ့နှံ့နေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့ ဗြိတိန်မှာ တွေ့ရှိလာရတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကို များစွာ မသိနိုင်သေးပါဘူး။ သို့သော် ထိုဗိုင်းရပ်စ်သစ်တွေ့ရှိရာ အင်္ဂလန်ရဲ့ နေရာဒေသတွေမှာ ကူးစက်မှုများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း COVID-19 Genomics Consortium UK (COG-UK) က ပြောထားပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်မှာ ထူးထူးခြားခြား ကြီးမားတဲ့ မျိုးဗီဇအပြောင်းအလဲများရှိကြောင်း COG-UK က ပြောပါတယ်။ COG-UK က ပြောကြားမှုအရ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု သုံးခုဟာ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ အရေးပါမှု ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု သုံးခုလုံးကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ရဲ့ spike protein ထဲမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိရပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ spike protein (ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာပေါ်ရှိ အချွန်အတက်လေးများ) ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်များအတွင်းသို့ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရောက်မှုနဲ့ ဆက်နွယ်ပါတယ်။ ထို့အတူ ကိုယ်ခံစွမ်းအားနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိရောက်မှု အခြေအနေတို့နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာ နာတာရှည် ကူးစက်ခံထားရသူတစ်ဦးထံမှတစ်ဆင့် ထပ်ဆင့်ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကနေ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ COG-UK သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ယူဆကြပါတယ်။
ဗြိတိန်မှာ ယခုတွေ့ရှိရတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်က အခြား ဗိုင်းရပ်စ်တွေထက် ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ကူးစက်နိုင်ကြောင်း PHE က ပြောထားပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ် တွေ့ရှိရတဲ့ နေရာတွေမှာ ကူးစက်မှုနှုန်းဟာ ခန့်မှန်းထားတာထက် ပိုမိုမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ PHE က ဆိုပါတယ်။
ယခုဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ဟာ လက်ရှိ ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အခြား မျိုဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်တွေထက် ကူးစက်မှုနှုန်း ပိုမြင့်မားပါတယ်။ သို့သော် ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့အထိ လေ့လာတွေ့ရှိထားမှုအရ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်က COVID-19 ရောဂါ ပိုမိုပြင်းထန်စေမှု သို့မဟုတ် ပိုမိုသေဆုံးစေနိုင်မှုတို့ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အထောက်အထား မတွေ့ရဘူးလို့ PHE က ပြောထားပါတယ်။
PHE က ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ရန် ဆက်လက် လေ့လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်မှု ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ် တွေ့ရှိလာရတာကြောင့် mask တပ်ခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်း၊ လူစုလူဝေးရှောင်ခြင်းကဲ့သို့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေး စည်းမျဥ်းတွေကို ပိုမိုတိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
ယခင်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိခဲ့လား?
၂၀၁၉ နှစ်ကုန်မှစပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုများ ထောင်နဲ့ချီ ရှိခဲ့တယ်လို့ COG-UK က ဆိုပါတယ်။ "ဗိုင်းရပ်စ်က ပွားများပြီး လူတွေကြားမှာ ပျံ့နှံ့နေသလောက် SAR-CoV-2 (ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်) မျိုးဗီဇပြောင်းမှုတွေ သဘာဝအလျောက် ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်" လို့ COG-UK က ပြောပါတယ်။ ယခင်ကလည်း မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို အာဆီယံဒေသတွင်း မြန်မာ၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ဖိလစ်ပိုင် အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ‌လည်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်အားလုံးဟာ မျိုးဗီဇပြောင်းလေ့ရှိပြီး အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ဗိုင်းရပ်စ်တွေမှာ အနည်းငယ်မျှသာ ပြောင်းလဲမှုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ မျိုးဗီဇပြောင်းမှု အများစုဟာ ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် ၎င်းရဲ့ ပြုမူစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ် များစွာ သက်ရောက်မှုမရှိတတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သို့သော် ဗြိတိန်မှာ ယခုနောက်ဆုံး တွေ့ရှိလာရတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ ကူးစက်မှု သိသာစွာ ပိုမိုမြန်ဆန်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကာကွယ်ဆေးက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကို ကာကွယ်နိုင်မလား?
လက်ရှိအချိန်အထိ Pfizer-BioNTech ကာကွယ်ဆေးက မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်မပေးနိုင်ကြောင်း အထောက်အထား မရှိဘူးလို့ PHE က ပြောပါတယ်။ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကာကွယ်ဆေးကိစ္စကို ဦးစားပေးအဖြစ် နောက်ထပ် ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်လေ့လာမှု လုပ်ဆောင်နေကြောင်း PHE က ဆိုပါတယ်။ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ် တွေ့ရှိလာရတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ Pfizer-BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု အစီအစဥ်ကို ဒီဇင်ဘာလအစောပိုင်းက စတင်ခဲ့ပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးမှုတွေ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
(ဗြိတိန်မှာတွေ့ရတဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့အထိ သိရှိရတဲ့ အချက်အလက်များဖြစ်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ လေ့လာမှုများအရ အပြောင်းအလဲရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်)
Ref. and Photo: Bloomberg, Getty Images, BBC, CNA, AFP, AP